गौरीफन्टाबाट उद्धार गरिएका नेपाली कुन जिल्लाका कति ? – Koshidaily
गौरीफन्टाबाट उद्धार गरिएका नेपाली कुन जिल्लाका कति ?
access_alarms Koshi daily १२ चैत्र २०७६, बुधबार ०५:०४	chat_bubble_outline 0	Comments
धनगढी : एक रात र एक दिन कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा अलपत्र परेका एक हजार नेपालीलाई उद्धार गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाईएको छ। २१ जिल्लाका नौँ सय ९८ जनालाई उद्धार गरीएको उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामै क्वारेन्टाईनमा बस्नु पर्नेछ। उद्धार गरिएका नेपाली मध्ये सबैभन्दा बढि कैलालीका दुई सय ९१ जना थिए। उनीहरुलाई ५ वटा बसमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाईएको छ।
एउटा बस अत्तरिया र अन्य चार वटा टिकापुर क्षेत्रका लागि छुटेका थिए। त्यसपछि डोटी जिल्लाका दुई सय १४ जनालाई ६ वटा बसमा सम्बन्धित स्थडानीय तहमै पुगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। बैतडीका ८७, बझाङका ६८, अछामका ६६, डडेल्धुराका ६५, कञ्चनपुरका ५१ र दार्चुलाका ३४ जनालाई बसमा सम्बन्धित जिल्लामा पठाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
सुुदूरपश्चिम बाहिरका पनि एक सय २२ जनालाई बसमा सम्वन्धित जिल्ला पठाईएको छ। सुर्खेतका ४२, पाल्पाका ३८, कालिकोटका १२, दाङका ८, प्युठान र बाग्लुङका ३÷३, कपिलवस्तुका २, बर्दिया, बाँके, जनकपुर, चितवन, रुकुम, रुपन्देहीका १÷१ जनाको उद्धार गरी पठाईएको छ।
संघीय सरकारको आदेशपछि सुदूरपीश्चम सरकार र स्थानीय प्रशासनले यातायात प्रालीसंग समन्वय गर्दै २१ वटा बसमा उनीहरुलाई गन्तव्य पठाईएको हो। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालिका अध्यक्ष पदम सापकोटाले आफ्नो समितिले मात्रै १५ वटा गाडी यात्रुलाई पुगाउन दिएको जानकारी दिए। उनीहरुलाई स्कटिङमा गन्तव्य पुगाईदैछ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले आज सम्म दशगजा क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरुको विवरण तयार पारी गन्तव्य पठाईएको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रत्येक स्थानीय तहले क्वारेन्टाईनमा राख्ने समेत निर्णय भएको छ।